धेरै अगाडी भैरव अर्यालको "आलु" भन्ने निबन्ध पढेको थिएँ । तपाईको लेख पढेपछि लाग्दैछ बामदेव पनि नेपाली राजनीतिका "आलु" हुन । नत्र कुनै समयमा राजाका प्रीय पात्र रहेका मान्छे अहिले माओबादिका विश्‍वास पात्र हुनु सामान्य कुरो हो त?
तर संगसंगै उनको हालसम्मको चरित्रलाई हेर्दा भने 'दूईवटा डुङ्गामा खुट्टा हाल्ने...' ऊखान पनि याद आँउछ ... हेरौं अगाडी के हुन्छ ।
बामदेवले क्लब,क्याफेमा नियाम लगाउदै छन, राम्रो कुरो हो, तर यो बामे के काठमान्डुका मेयर हुन त? नेपालको अन्य भागमा कानुनको पालना गर्ने यिनको जिम्मा होइन?
भ्रष्टचारको कुरोमा त बामे नं १ हुन, यसमा २ मत छैन। हलि कमरेडको जिबन यापन देखेर तपाइ नै आकलन गर्नसक्नुहुन्छ। आफु मात्र होइन एक पटक यिनका छोराले चिनमा गरेको मोज मस्ती एक पत्रकारले चीठ्ठी बटा भण्डाफोर गरेका थिए।
बिचराको छोराले चीनमा मस्ती मात्र हैन खुबै सास्ती पनि भोगेको थियो । त्यो कति किलो हो सुन ठ्याम्मै फुटेको पार्टी चलाउंदा सकिएको हो । अब देशै क्लब, भट्टी र क्याफेमा छ भनेर हो कि नियम कानुन पनि त्यतै लगाउन थालेका । गर्नै पर्ने त अरु पनि धेरै काम थिए !
कुरो जे भए पनि देश चलाउन हल्दारै चाहिने रहेछ, गिरिजा हुन वा बामदेव हुन नेपालका "कुशल" चालक यिनै मात्र होलान !